Midkoodna Warshad Dhar Ah Oo Ah Midab-Xiran - Shiinaha Midkoodna Wax-Soo-Dharka Dharka Ku Xidhxan, Alaab-qeybiyeyaal
Shirkaddeenu waxay ku adkeysaneysaa dhammaan nidaamka caadiga ah ee "waxsoosaarka tayada sare leh inuu saldhig u yahay badbaadada ganacsiga; qanacsanaanta macaamilku waxay noqon kartaa barta ugu dambeysa iyo dhamaadka ganacsiga; horumarka joogtada ah waa raadinta weligeed ah ee shaqaalaha" iyo sidoo kale ujeedka joogtada ah ee "sumcadda marka hore , macmiil marka hore "for None tolmo wanaagsan Fabric,,,, Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweyneynaa macaamiisha ka imaaneysa labada dal iyo dibadba inay noo yimaadaan si ay noola xaajoodaan ganacsiga. Iyada oo tikniyoolajiyad casri ah iyo tas-hiilaad, maareyn tayo wanaagsan oo adag, qiime macquul ah, kaalmo sarreysa iyo iskaashi dhow oo lala yeelanayo dadka wax iibsanaya, waxaan u heellannahay bixinta qiimaha ugu wanaagsan ee macaamiisheena None tolmoow ah Fabric, Hubinta tayada wax soo saarka sare adoo dooranaya kuwa ugu fiican alaab-qeybiyeyaasha, waxaan sidoo kale ka hirgelinay geedi socodyada xakamaynta tayada oo dhammaystiran inta aan ku jirno hanaankeenna soo-saarka. Dhanka kale, helitaankeena warshado badan oo kala duwan, oo ay weheliso maareynteena heer sare ah, ayaa sidoo kale hubineysa inaan si dhakhso leh ugu buuxin karno shuruudahaaga qiimaha ugu fiican, iyadoo aan loo eegin cabirka dalabka.
faahfaahinta: miisaanka. 25 gsm 35 gsm 50 gsm 60 gsm 70 gsm 80 gsm ama sida amarku yahay
Midab: Buluug iyo cadaan
Xirxirida: xirxiraan duub.
(karti): 300TON / Bisha
Dekedda gaarsiinta: deked kasta oo Shiinaha
Qaab dhismeedka: Polypropylene100%
qeexitaan: 30 gsm 40 gsm 50 gsm 60 gsm 70 gsm 80 gsm ama sida amarku yahay.
Midab: dhammaan noocyada midabka iyo culeyska.
Xirxirida: xirxirida duub, baallooyinka, sanduuqyada.
Capacity 能 (karti): 400TON / Bishii
Qaab dhismeedka ： Polypropylene100% + PU
Wareeg: 60 ”
faahfaahinta ： 60 gsm, 70 gsm ama si waafaqsan amarka.
kartida: 40TON / Bisha
Faa'iidada: Qiimaha ugu fiican, tayada & adeegga, falcelinta degdegga ah, xakamaynta tayada wanaagsan.
Waxyaabahayagu waxay u dhoofiyaan Yurub, Mareykan, Koonfur-bari Aasiya, Kuuriya, Japan, wax soo saar qaan-gaar ah, iib iyo xamuul, kuwaas oo u adeegsan kara isbitaalka, hay'adda sayniska, miinada, iwm.
Qaab dhismeedka: Polypropylene
faahfaahinta: 42 gsm 50 gsm 55 gsm 60 gsm 70 gsm ama si waafaqsan amarka.
Midab: caddaan / buluug / jaalle
Ballaca: 57-62 ”
awood: 80TON / Bisha
midab: nooc kasta oo midab ah (sida ay u kala horreeyaan).
faahfaahinta ah: miisaanka si waafaqsan.
Xirxirida: xirxiraan duub ama goynta.
Awoodda: 400TON / Bishii
BARNAAMIJKA SOO SAARKA: Deked kasta oo laga leeyahay Shiinaha
Hydrophilic Aan-tolmo wanaagsan
midab ： cadaan
awood ： 400TON / Bishii